DEG DEG: Ra’isul wasaaraha itoobiya oo hada shirka london ugu dhawaaqay hadal ay la fajaceen beesha caalamka iyo madaxda soomalia | Kismaayo24 News Agency
Thursday May 11, 2017 - 12:08 under Breaking News by Tifaftiraha K24
Ra’isul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn oo khudbad dheer ka jeediyay shirka london ka socda ee arimaha soomalia looga hadlaayo ayaa waxa uu ka hadlay qodobo xasaasi ah oo ku saabsna xaaladda soomalia.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa codkiisa ku biiryay dalabaka uu shirka ka jeediyay madaxweyne Farmaajo ee ahaa in Soomaaliya laga qaada cunaqabataynta hubka.
Desalegn wuxuu sheegay inay taasi gacan ka geysan karto qalabaynta ciidammada dowladda wuxuuna beesha caalamka ka codsaday in soomalia laga taageero dhismaha ciidanka qaranka si ay ula wareegaan amniga dalkooda.
Wuxuu sheegay in Itoobiya ay ku farxi lahayd markii Soomaaliya laga qaado Cuna qabateynta hubka ah ee saaran, loona fasaxo iney helaan hub dalkooda ku difaacdaan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Geesta kale ra’isul wasaaraha itoobiya ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah alshabaab ee ka socda soomalia waxaana uu sheegay in shabaab aaney laga adkaan weli.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, ayaa sheegay in la jabiyay al Shabaab balse aan la cirib tirin oo ay wali yihiin halis jirta.
Wuxuu intaas ku daray in xoogaggoodu ay naftooda u hureen nabadaynta Soomaaliya ayna sii wadidoonaan dagaalka shabaab kula jiraan si soomalia ay nabad u gasho.
Ra’isul wasaare desalegn ayaa sheegay in hada ciidankooda uu dagaal culus shabaab ku dhexmaraayo deegaanka halgan ee gobolka hiiraan isagoona sheegay in shabaab ay weerar ku yihiin markasto ciidanka soomalia iyo ciidanka amisom.
Arintaan ayaa muujineysa in ra’isul wasaaraha itoobiya uu ka war haayo dagaalada ay shabaab ku qaadayaan ciidanka ka jooga soomalia waxaana uu ka dhawaajiyay in hada uu dagaalka socdo.